Facebook ကိုဖျက်ပစ်ပါ, အဘယျသို့လာမယ့်? 🤔 - 💌 WebTK - သင်၏လက်မှတ် WebTalK 🚀, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သတင်း & ပိုပြီး Invite 🔥
ဧပြီလ 3, 2020 သြဂုတ်လ 6, 2019 by Webtk.co
သင်ရုံ Facebook ကိုဖျက်ပစ်ခဲ့ကြပြီးပိုကောင်းတဲ့ Facebook ကအခြားရွေးချယ်စရာရှာနေလဲ? ကျနော်တို့အဖြေရှိသည်! 😁
သင့်ရဲ့ privacy ကိုရိုသေလေးစားသောကွန်ရက်တစ်ခု, သင်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုအချိန်နှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေအများကြီးကယ်တင် တကယ်သင်တို့၌အရေးပါသောသတင်းအချက်အလက်တိုက်ရိုက် access ကို။ နှင့်အကောင်းဆုံး, အကောင်းဆုံး, ကွန်ယက်ကို ၎င်း၏အကျိုးအမြတ်ရှယ်ယာ 50% သင်တို့နှင့်အတူရှိအစားလုပ်ပေး Facebook နှင့် LinkedIn တို့ကဲ့သို့သင်တို့ despising ။ ဒီနည်းကို IS WEBTALK!
ဘယ်လိုမျိုး Webtalk အခြားလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်
ဤတွင်၏ 12 အဓိကအားသာချက်ရှိပါတယ် Webtalk Facebook ကိုကျော်:
အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော ပလက်ဖောင်း: Facebook က 2004 အတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်အမှန်တကယ်ယခုအားဖြင့်ခက်ခဲသည့်ကိစ္စနှင့်ခေတ်မမီတော့ခံစားရနေစဉ်, Webtalk အစိုင်အခဲသစ်ကိုအုတ်မြစ်ဟာနှစ်ပေါင်း 2020 နှင့်ကျော်လွန်ဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုကောင်းတဲ့ privacy: Pro ကိုအသုံးပြုသူများကကြော်ငြာတွေကိုမမွငျပါဘူးနှင့်အခြားအားသာချက်များအောက်မှာခြေရာခံရကြပါဘူး။
စိတ်ကြိုက် profile များကို သင့်ပရိုဖိုင်းကိုဧည့်သည်များရန်သင့်အခွက်တဆယ်တခုအဖြစ်နိုင်စွမ်းကမ်းလှမ်းတဲ့လှပသောတုံ့ပြန်မှုက်ဘ်ဆိုက်, မလူမှုမီဒီယာပရိုဖိုင်းကဲ့သို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခံစားရတယ်
ဘက်ပေါင်းစုံ မူပိုင်ခွင့်-ဆိုင်းငံ့ အဆက်အသွယ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အ အဆင့်မြင့်အမျိုးအစား and Tagging features တွေနှင့်အတူသငျသညျတူညီသောတည်နေရာကနေပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်ဦးစလုံးအားလုံးသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်များ, စီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်။ ချက်ချင်းဒီတော့သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအနေဖြင့်သင့်မိသားစုကနေသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုခွဲခြား အဆိုပါလိုင်းများကိုမကူးကြပါ.
တစ်ခုတိုးတက်, မူပိုင်ခွင့်-ဆိုင်းငံ့ Newsfeeds ကြောင်းမှတဆင့်သင့်အတွက်အရေးကြီးသောသတင်းမှတိုက်ရိုက် access ကိုကမ်းလှမ်း အဆင့်မြင့်စစ်ထုတ် စွမ်းရည်။ သာသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှသတင်းသို့မဟုတ်သင့်မိသားစုကိုကြည့်ပါ: သင်ထိန်းချုပ်များမှာ! Instagram ကိုသို့မဟုတ် YouTube ပေါ်မှာတူသောသာဗီဒီယိုများပေါ်တွင်နဲ့တူသာဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှုရန်သင့် Newsfeed ကို Filter ။
သင့်ရဲ့ Newsfeeds ထိန်းချုပ်ပြန်ရယူပါ!
မှော် Newsfeeds သငျသညျအကြောင်းအရာ (ဖိုင်, ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို) ၏မည်သည့်အမျိုးအစား post နိုင်စွမ်းမှကမ်းလှမ်း WebtalkFacebook က, LinkedIn, Twitter နဲ့လျှော့တစ်ချိန်တည်းမှာ။ ဤသည်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် လူမှုရေးစုစည်း.
ယင်း၏ shared နှင့်သန့်ရှင်းမှုနှင့်အလိုအလျှောက်တစ်ဦးသို့ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်သင်၏အကြောင်းအရာတစ်ခုအနက်ဆုံးသောတွင်းထဲသို့ပျောက်ကွယ်သွားပါဘူး အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။
မူပိုင်ခွင့်-ဆိုင်းငံ့ Marketplace သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်းကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများရောင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်တဆင့်ပေးဆောင်ရသည့်နေရာတွင်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုကိုအင်္ဂါရပ်တွေနှင့်အတူ Webtalk.
A ထူးခြားတဲ့ကျနော်တို့မှာအများကြီးအကျိုးအမြတ် Affiliate Program ကို ခေါ်တော် Social CPXဘယ်နေရာမှာသင်စာသားသင်၏မိတ်ဆွေများကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာဝင်ငွေရနိုငျသညျ။ သုံးပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်အထဲက Check ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေဂဏန်းတွက်စက်.
သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိဖို့ပေးဆောင်ဘယ်တော့မှမ: ပေါ်တွင်သင်၏ပို့စ်များ Webtalk စာမျက်နှာများကိုအမြဲ Facebook ကနဲ့မတူဘဲ, သင့်ပရိသတ်ကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
10% လှူဒါန်းမှုအပေါင် ယင်းမှတဆင့် Webtalk ဖောင်ဒေးရှင်း ကမ္ဘာကြီးကိုကူညီရန် non-profit သွားပါ။
Facebook မှာ Messenger ကိုအကြောင်းကိုမေ့လျော့: EventWave ကို virtual နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ရက်များအကြားကွာဟချက်ကိုတံတားနှင့်၏တန်ခိုးကိုအသုံးပြုသည် Webtalk'' s ကိုလူမှု CRM အဆက်အသွယ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်ဝယ်လိုအား meetups နှင့်ဖြစ်ရပ်များပေါ်နောက်ဆုံးမိနစ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ Newsfeed ကိုသည့်။ သူကတောင်အဖြစ်အပျက်ရန်သင့်အားယူတစ်ခု Uber ဆင့်ခေါ်ကာလူစုလူဝေးအတွင်းလူတစ်ဦးမှတက်သငျသညျလမ်းလျှောက်တဲ့ပြင်ပ / မိုးလုံလေလုံရေဒါရှိပါတယ်!
Webtalk features တွေဘက်-by-side တခြားပလက်ဖောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ
သငျသညျသေး Facebook ကိုဖျက်ပစ်ကြပြီမဟုတ်လျှင်, ငါတို့သည်အလွန်အမင်းဒီအကြံပြု In-depth အွန်လိုင်းလမ်းညွှန် အက်ဒွပ် Cant ကရေးသား။ ငါတို့သည်လည်းအောက်ပါဖတ်အကြံပြု:
Facebook ကိုဖျက်ပစ်ရန်ကဘယ်လို (မိက္ခာမှာ Singleton, The Verge) ။
လူမှုကွန်ယက်၏အခမဲ့ကိုချိုး (ဒီဂျစ်တယ် Trends) ။
Facebook မှာဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကိုဘယ်လို (အဲရစ်ဂျွန်ဆင်, Recode) ။
အမြဲတမ်းအတွက်တစ်ဦးက Facebook အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားဖို့ကိုဘယ်လို (က Wired ဗြိတိန်) ။
ProBeat ။ Facebook ကိုဖျက်ခြင်း၊ (Emil Protalinski, VentureBeat) ။
သင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဖျက်ခြင်း3လွယ်ကူသောခြေလှမ်း၌ပြစ်မှားမိပေမယ်ငါတို့သည်သင်တို့ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီသင့်ရဲ့ဒေတာကိုတစ်ဦး backup လုပ်ထားယူအကြံပြုနိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းစောင့်ချင်ပေလိမ့်မည် Webtalk'' s ကိုလာမည့် ဆိုရှယ်မီဒီယာတင်သွင်းအင်္ဂါရပ်: တစ်ခုတည်းကလစ်နှင့်အတူ Facebook, Twitter Instagram ကို, linkedin ကနေအားလုံးသင့်ရဲ့ဒေတာကိုတင်သွင်းဖို့စွမ်းရည်။
Facebook အသုံးပြုသူများသမိုင်းတွင်အကြီးဆုံးမရတဲ့လုပ်သားအင်အားများမှာ တွင်ဖော်ပြထားအဖြစ် ဤဆောင်းပါးတွင်. Webtalk'' s ကိုအခမဲ့ Social CPX ဝင်ငွေခွဲဝေမှု Affiliate Program ကို အဲဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူဖို့ရွေးချယ်သောသူတို့အဘို့ကြောင်းပြဿနာတစ်ခုရပ်တန့်ထားရလိမ့်မယ်။
"Facebook နှင့် LinkedIn တို့ 20-တစ်နှစ်တာ Ford ဖြစ်ကြောင်းမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, Webtalk အသစ်က Ferrari ပြိုင်ကားပါလိမ့်မယ်။ "
အဘယ်သူ၏ကွန်ယက် join leitmotiv ပထမဦးဆုံးက၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ထားလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှပတ်လည်မှာသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထောကျပံ့များနှင့်ယုံကြည်မှုန်းကျင်တစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အနာဂတ်မှာလက်ခံ: ပူးပေါင်း Webtalk ယခု!
ကျနော်တို့မှ Facebook မှာထံမှ switching အကြောင်းကိုဒီရယ်စရာ meme အားဖြင့်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာချင် Webtalk: 😂
သင်သည်လည်း Facebook ကိုဖျက်ပစ်နှင့်ပေး၏လိုလျှင် Webtalk တစ်ဦးပါ, အောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြကျေးဇူးပြုပြီး🤗
သငျသညျအစဉျအမွဲကမ္ဘာကြီးကို Facebook ကိုကြီးထွားဖို့ဆက်လက်လျှင်သင်စစ်မှန်သောလူမှုရေးနောက်ခံနှင့်အတူကောငျးမှသိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်, သင် Amara ၏ဇာတ်လမ်းနှင့်မည်သို့သူမက၏ကြီးမားသော Facebook ကို angainst တော်လှန်ရေးစုစည်းခစျြလိမျ့မညျနှစ်တွင်တူသော 2030 ကြည့်ရှုနိုင်ပုံကိုအံ့ဩခဲ့လျှင် သူမ၏အချိန်။ သငျသညျ # ခစျြလိမျ့မညျAnalog2030! 😍
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဧပြီလ 3, 2020
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား အကြောင်းအရာ Webtalk, အဘို့အမြှင့်တင်ရေးရေးသားချက်များ Webtalk, Webtalk စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Tags: #deletefacebook, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စာမျက်နှာ, Facebook အများ၏ဝေဖန်မှု, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, Facebook က, Facebook မှာ vs Webtalk, Instagram ကို, အင်တာနက် privacy, LinkedIn တို့, LinkedIn တို့ vs Webtalk, သီးသန့်လုံခြုံရေး, လူမှုသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့, ဆိုရှယ်မီဒီယာ, social networking service ကို, Software များ, ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ, အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေး, ဝတ္ဆုိက္မ်ား , အင်တာနက်မှလမ်းခွဲ မှတ်ချက် Leave post navigation
Bryan Hawn: သင်ပိုမိုနောက်လိုက်ချင်ပါသလဲ?
Inkbox Tattoos: သင်ပိုမိုနောက်လိုက်ချင်ပါသလဲ?
ပင်မစာမျက်နှာ - အကြောင်းအရာ Webtalk - Facebook ကိုဖျက်ပစ်ပါ, အဘယျသို့လာမယ့်? 🤔